Oge ezumike dị iche iche na-enweghị ike ileghara anya | Martech Zone
Oge ezumike adighi ike ileghara anya
Fraịdee, Nọvemba 30, 2012 Tọzdee, Disemba 4, 2012 Douglas Karr
Oge ezumike bụ oge ịtụnanya n’ihi n’uche m, ihe niile gbasara azụmahịa na nkwalite. Ọ seams na ike nke afọ, ọkụ eletrik na-echegbu ndị na-ere mma, mmekọrịta, nloghachi atumatu na mbupu ... ma o yiri ka ọ ga-apụ na windo n'oge ezumike. Mgbasa Ozi MDG etinyela nke a infographic ụfọdụ n'ime ọnọdụ ndị ha kwenyere na ndị ahịa enweghị ike ileghara anya.
Kwa afọ, ezumike ahụ na-eweta ndị na-azụ ahịa na-achọ onyinye dị mma na azụmaahịa dị mma. Ogologo oge tupu ndị mmadụ erute ebe a na-ere ahịa, ndị na-ere ahịa nwere anya ha ka ha na-ahụ usoro ịzụ ahịa n'oge a nke ga-ekpebi ntụzịaka nke mbọ ahịa ezumike ha. Iji nye ndị ahịa a onyinye nke nduzi, Mgbasa Ozi MDG mepụtara ozi mmemme ndị a. Ọ na-egosi otú dijitalụ si akwọ ụgbọala ka ndị America si azụ ahịa na imefu oge a.
My takeaway… ị ka mma nwere nnukwu azụmahịa na ị ka mma ịdị njikere ịzụ ahịa na heck ha. Olileanya, ndị folks ga-agbakwunye ihe ndị ọzọ dị na ụgbọ ibu azụmahịa ha ka ị laghachi na nwa!
Tags: emume ezumikemdg mgbasa ozi